Ogaden News Agency (ONA) – Magaalada Nairobi waxaa laga xusay aas aaskii JWXO
Magaalada Nairobi waxaa laga xusay aas aaskii JWXO
Magaalada Nairobi waxaa caawa laga xusay aas aaskii jabhada waddaniga xoreynta Ogaadeeniya waxaan aan kala hadh lahayn isugu soo baxay dhalinyarada Ogaadeeniya ee kunool Magaalada Nairobi iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee jecel halganka gobanimo doonka aha ee Ogaadeeniya ka socoda.
Xaflada lagu xusayey aas aaskii JWXO waxaa abaabulay kooxda dhalinyarada Danab ee Jaaliyadaha Afrikada bari ee S.Ogaadeeniya oo aha koox caan ku aha abaabulka iyo badhigida riwaayadaha.
Hadaba xaflada oo ay ka qayeb galeen dhaliyaro aad u tiro badan ayaa ka dhacay xaafada Islii waxayna dhalinyaradu isku baraarujiyeen in door fiican laga qaaton Halganka gobanimo doonka aha ee mudad dheer soo socoday kaas oo bay dheheen aan xusayno sanadguuradii 28 aad ee ka soo wareegtay aas aaskiisii.
Waxaa caawa xafladan laga akhriyey Qoraal aad u dheer oo ka hadalayey Taariikhda halganka gobanimo doonka aha ee Ogaadeeniya ka socoda iyo xaaladihii uu soo maray wuxuuna qoraalka nuxurkiisu ahaa in halganka waliba uu leeyahay dhibaatooyin laakiin waligeed uu guulaysto qofka gobanimo doonka ah Guumaystena uu guul dareysto.
Dhamaan dhalinyaradii ka qayeb gashay xafladan ayaa dhagaha uraariyey dardaaran ay maamulka dhalinyarada Kooxda danab u jeediyeen oo aha in waajib uu saaranyahay dhalinyarada Ogaadeeniya loona baahnayahay in loo guntado ka qayeb qaadashada Halganka Ogaadeeniya ka socoda.